A study on the circu - Anglais - Birman Traduction et exemples
Vous avez cherché:astudy on the circuit design for xc4000 (Anglais - Birman)
However,astudy on 1,099 cases demonstrates that the incubation period was3days on average and ranged from0to 24 days.
သို့ရာတွင် လူနာ 1,099 ဦးကို လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပျမ်းမျှရောဂါအစပျိုးချိန်ကာလသည်3ရက်ဖြစ်ပြီး အစပျိုးနိုင်သော ကာလမှာ0ရက်မှ 24 ရက်အထိ ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ တူရကီသုတေသနအဖွဲ့သည် ကလိုရိုကွင်းကို သွပ်ဓာတ် ၊ ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်စီနှင့် ဗီတာမင် ဒီတို့နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှု အသေးစားတစ်ခုကို ပြုလုပ်နေပါသည်။
On January 24 the first clinical study on the disease reported that, out of 41 patients with confirmed cases, only 21 had direct contact with the Wuhan seafood market that was considered the starting site of the infection from an unknown animal source.
ဇန်နဝါရီလ 24 ရက်နေ့တွင် ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဦးဆုံး လက်တွေ့လေ့လာမှုအရ အတည်ပြုပြီးသော ရောဂါကူးစက်ခံထားရသည့် လူနာ (41) ဦး အနက် (21) ဦးသာ အမျိုးအမည်မသိသေးသော တိရစ္ဆာန်မှ ကူးစက်မှု စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည့် ကနဦးနေရာ ဝူဟန် ပင်လယ်စာဈေးသို့ သွားလာဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
cintakan (Malais>Coréen)apa maksud tinggal ditala bahasa melayu (Malais>Anglais)gramineae (Espagnol>Letton)alam mo na kung sino (Tagalog>Anglais)au revoir et bon vent (Français>Breton)pekerja sambilan harian (Malais>Anglais)are you awake (Anglais>Maori)buah fikiran 的华文意思 (Malais>Chinois (simplifié))maksud one true pairing dalam bm (Malais>Anglais)rivoluzionario (Italien>Arabe)jaan se bhi pyara translate in english (Hindi>Anglais)feel offended (Anglais>Malais)kaakibat meaning (Anglais>Tagalog)maksud very lucky to have you (Anglais>Malais)rio (Indonésien>Anglais)bora dda (Gallois>Anglais)setawar (Malais>Chinois (simplifié))anong ginagawa nyong dalawa (Tagalog>Anglais)portareatermine il progetto (Italien>Anglais)watashi wa anata (Japonais>Espagnol)tehtäisiin (Finnois>Vietnamien)conflicts of interest may arise (Anglais>Malais)tree branch (Anglais>Latin)one love, one life (Anglais>Portugais)lihat komentar (Indonésien>Anglais)